महालक्ष्मी विकास बैंकको खुद नाफा ७१ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? « Artha Path
महालक्ष्मी विकास बैंकको खुद नाफा ७१ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड खुद नाफा ७१ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथौ त्रैमाससम्ममा बैंकले ७३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा ४२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । यो अघिल्लो आव को तुलनामा ७१ प्रतिशतले उकालो लागेको हो ।
Tags : खुद नाफा महालक्ष्मी विकास बैंक